Bayaanka 'Kanal Istanbul' ee Madaxweyne Erdogan | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulBayaanka 'Channel Istanbul' ee Madaxweyne Erdogan
Isaga oo ka hadlayey Munaasibad Balaaran oo lagu qabtay Xarunta Duullimaadka Diyaaradaha ee Magaalada Gayrettepe-Istanbul, Madaxweyne Recep Tayyip Erdopan wuxuu yiri waxaan xitaa soo daaheynay qabashada Mashruuca Canal Istanbul.
Erdogan wuxuu sii waday hadaladiisa sida soo socota: “Erdogan wuxuu sheegay inay Kanal Istanbul u sheegeen marar badan tan iyo sanadkii 2011, laakiin inuu mar kale u sheegi doono mashruuca, laakiin ma oga inuu ka faa'iideysan doono kuwa indhaha iyo indhaha, kuwa aan wax maqlin iyo kuwa aan hadli karin ama hadli karin.
Isagoo cadeeyay in celcelis ahaan 45 kun oo maraakiib ah ay maraan Bosphorus sanad walba 500 kun oo qofna ay ku safraan inta udhaxeysa labada dhinac ee magaalada maalin walba, Erdogan wuxuu carabka ku adkeeyay in cadaadiska saaran Bosphorus iyo isku socodka dadka uu kordhayo sanad walba.
Erdogan, sida uu sheegayo heshiiskii Montreux Straits Convention, wuxuu cadeeyay in aysan jirin fursad lagu xakameyn karo maraakiibta ganacsiga ee sii gudbaya, wuxuu yiri:
“Laakiin xitaa ma garanayaan halka uu ku yaal Shirka Montreux Convention. Haddii Kanal Istanbul isku xirto Shirka Montreux iyo in kale, waxba kama oga. Hal jeer, Kanal Istanbul wax shaqo ah kuma lahan Shirweynihii Montreux, tani waa la yaqaan. Codsiyada sida duuliyeyaasha iyo matoorrada ayaan xilligan ku filnayn inay ka hortagaan shilalka ka dhaca Bosphorus. Maadaama aannaan ka saari karin hunguriga, waxay ahayd inaan helno xal xagjir ah dhibaatada. Markaan eegno tusaalooyinka adduunka, waxaan aragnaa in marin biyoodka Kanal Istanbul ay labadaba caan yihiin oo aad u faa'iido badan. Kadib markii aan u ballan qaadnay ummaddeena 2011, waxaan baranay casharkeena talaabo talaabo talaabo ah. Xaqiiq ahaan, waxaan xitaa ka soo daahnay inaan sameyno Kanal Istanbul, mid ka mid ah yoolasheena 2023. ”
Madaxweyne Erdoğan wuxuu cadeeyay in howsha sida juqraafi, juquraafiyadeed, cilmi baarista biyaha, mowjadaha iyo falanqaynta dhulgariirka, sahaminta taraafikada, baahiyaha barakaca kaabayaasha iyo daraasadaha saameynta deegaanka lagu dhammeystirey heerka diyaarinta hordhaca ah ee mashruuca.
Isagoo cadeeyay in in kabadan 34 oo saynisyahano ah oo ka kooban 200 laamood oo saynis ah ay ku hawlan yihiin daraasadahan, Erdogan wuxuu cadeeyay in sida ugu haboon ee 5ta wadooyin ee kala duwan loo go'aamiyo kanaalkaasna la go’aamiyey oo loo shaaciyey umadda, iyo khadkan marinka ah, in kabadan 304 kun mitir oo qodista iyo 17 daraasad joqoraafi ah ayaa laga fuliyay 248 qodob oo kala duwan. Wuxuu yidhi waa la qabtay.
Erdogan wuxuu sheegay in ka dib tijaabooyinka shaybaarka iyo shaqooyinka dhulka, qaabeynta kanaalka ay la bilaabeen shirkadaha ugu horreeya adduunka ee qodan, iyo marxaladda hadda la gaarey dhameystirka mashaariic injineerinka iyo daraasadaha EIA.
"Kharashaadka dhismaha Kanal Istanbul ma ahan 125 bilyan oo lira sida qof uu sheegay, laakiin 75 bilyan lira hada hada." Ayuu yiri Erdogan, wadada laamiga ah labo deked, marin, xarun logistics, 7 buundooyin, 2 tareeno iyo 2 nal Wuxuu xusay in khadka tareenka uu dhici doono.
Erdogan wuxuu cadeeyay in kaliya 500 kun oo guryo ah loo ogolaan doono agagaarka kanaalka gudahiisa qaab dhismeedka isbedelka magaalooyinka, iyo in qodista ka dhici doonta inta lagu gudajiro howlaha dhismaha lagu qiimeyn doono qaab u gaar ah mashruucan, iyo in magaalada laga ilaalin doono dhibaatooyinka xun.
Qiimaha dhismaha ee Kanal Istanbul
Shirkii Montreux Straits